Job kwuru otú ihe si gbanweere ya (1-31)
O kwuru na ndị na-abaghị uru na-akwazi ya emo (1-15)
Ọ dị ya ka Chineke anaghị enyere ya aka (20, 21)
“Akpụkpọ ahụ́ m na-ejizi oji” (30)
30 “Ugbu a, ndị m tọrọ atọNa-achị m ọchị,+Ndị m na-agaraghị ekwe ka nna haNa nkịta ndị na-eche ìgwè ewu na atụrụ m nche nọrọ. 2 Olee uru ike ha nwere baara m? Ike ha alaala n’iyi. 3 Agụụ na ụkọ nri emeela ka ha gharazie inwe ume. Ha na-ata ájá dị n’ala kpọrọ nkụ,Nke a lara n’iyi, mebisiekwa. 4 Ha na-aga n’ọhịa akụrụ ahịhịa na-atọ nnu nnu. Nri ha bụ mgbọrọgwụ osisi brum.* 5 A na-achụpụ ha n’obodo.+ Ndị mmadụ na-eti mkpu na-eso ha n’azụ otú e si eme onye ohi. 6 Ha na-ebi ná mkpọda ndagwurugwu,N’oghere ndị dị n’ala nakwa na nkume. 7 Ha na-anọ n’ọhịa na-eti mkpu,Ha ga-agbakọtakwa n’ebe e nwere ahịhịa akụwa.* 8 Ebe ha bụ ụmụ ndị nzuzu na ụmụ ndị na-enweghị aha, A chụpụla ha n’obodo.* 9 Ma ugbu a, ha na-akwadị m emo ma ha gụwa egwú.+ Abụzi m onye ha ji eme ihe ọchị.*+ 10 Ha kpọrọ m asị, ha anaghịkwa abịa m nso.+ Ha anaghị atụ ụjọ ịgbụ m asọ mmiri n’ihu.+ 11 E nweghị ihe ha na-anaghị eme n’ihu m,N’ihi na Chineke emeela ka ike gwụ m, wedakwa m ala. 12 Ha na-ebili ka ìgwè mmadụ n’aka nri m. Ha chụrụ m ọsọ,Rụchiekwa ihe n’ụzọ m si aga ka ha laa m n’iyi. 13 Ha emebisịala ụzọ m si agaMa mee ka nsogbu m na-akakwu njọ.+ E nweghị onye na-akwụsị ha.* 14 Ha na-abịa ka à ga-asị na ha si ná nnukwu oghere dị ná mgbidi abata. Ha nukọọrọ na-abata n’ebe e bibiri ebibi. 15 Ụjọ zuru m ahụ́. Ùgwù m alaala ka uzuzu ifufe bufuru ebufu. Enweghịzi m olileanya na a ga-azọpụta m. 16 Ugbu a, m na-anwụzi anwụ.+ M na-ata ahụhụ kwa ụbọchị.+ 17 N’abalị, ọkpụkpụ m na-afụgbu m afụgbu.+ Ahụ́ na-egbusi m mgbu ike. Ọ naghị akwụsị akwụsị.+ 18 A na-eji nnukwu ike ahịkọ uwe m yi.* Ọ na-atọchi m olu otú olu uwe si atọchi mmadụ olu. 19 Chineke atụbala m n’apịtị. Abụzi m naanị ájá na ntụ. 20 M na-ebesara gị ákwá ka i nyere m aka, ma ị naghị aza m.+ M na-ebili ọtọ, ma naanị ihe ị na-eme bụ ile m anya. 21 I ji obi ọjọọ emesi m ike.+ I ji ike gị niile alụso m ọgụ. 22 I ji ifufe bulite m bufuo,Jirizie oké ifufe na-ebugharị m. 23 N’ihi na ama m na ị ga-eme ka m nwụọ,Ka m gaa n’ụlọ ebe onye ọ bụla dị ndụ ga-emecha gaa. 24 Ma e nweghị onye ga-akụ nwoke ike ụwa gwụrụ ihe+Mgbe ọ na-ebe ákwá ka e nyere ya aka n’oge ọ nọ ná nsogbu. 25 Ọ̀ bụ na ebereghị m ndị ihe siiri ike ákwá? Ọ̀ bụ na erughịrị m* ndị ogbenye uju?+ 26 M tụrụ anya ihe ọma, ma ọ bụ ihe ọjọọ bịara. M tụrụ anya ìhè, ma ọ bụ ọchịchịrị bịara. 27 Obi ezughị m ike. Nsogbu na-abịara m ụbọchị niile. 28 M na-agagharị, ma obi adịghị m mma.+ Anaghị m ahụ ìhè anyanwụ. N’ebe ndị mmadụ zukọrọ, m na-ebili bee ákwá ka e nyere m aka. 29 Abụrụla m nwanne nkịta ọhịa,Bụrụkwa enyi ụmụ enyí nnụnụ.+ 30 Akpụkpọ ahụ́ m na-ejizi oji, na-erekapụsịkwa.+ Okpomọkụ* emeela ka ọkpụkpụ m na-ere ọkụ. 31 Ọ bụ naanị abụ iru uju ka e ji ụbọ akwara m abụ,Ọ bụkwa naanị ndị na-ebe ákwá ka a na-afụrụ ọjà m.
^ Osisi a na-adị n’ọzara.
^ Na Hibru, “A pịara ha ihe pịapụ ha n’obodo.”
^ O nwere ike ịbụ, “E nweghị onye na-enyere ha aka.”
^ O nwere ike ịbụ, “Nnukwu ahụhụ m na-ata agbanweela otú ahụ́ m dị.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi m erughịrị.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ahụ́ ọkụ.”